शान्तालाई हटाउन बालुवाटारभित्रै जुलुस - Media Dabali
आइतवार, कार्तिक ९ २०७७Oct 25 2020
कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्याे यस्तो विज्ञप्ती
काठमाडौंमा थपिए यति संक्रमित, देशभर कति ?
२४ घण्टामा थपिए यति संक्रमित : सक्रियको संख्या घट्याे, निको हुने बढे !
Karnali government to set up 'Raute Safety Fund'
सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा १३ बालबालिकाको मृत्यु
दशैंका बेला कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयबाट आयो यस्तो सुचना
कोरोनाबाट विदेशमा थप एक नेपालीको मृत्यु, मृतकको संख्या कति ?
‘रअ’ प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएरआएका शंकर पोखरेलको दाबी
# सुवास नेम्बाङ
शान्तालाई हटाउन बालुवाटारभित्रै जुलुस
शुक्रवार, आश्विन ९ २०७७
तस्बिर : सामाजिक सन्जाल
काठमाडौं - अमेरिकन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण तनाबमा परेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको अधिवेशन हठातमा बन्द गरिदिए ।
संसद बन्द भएपछि ओलीले आफ्नो हल्लिरहेको कुर्सी बचाउन सफल भए । संसदमा प्रमुख विपक्षी दलसहितका अन्य दलका सांसदहरूलाई कोरोना र भोकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका जनताको कुरै सुन्नु परेन । ओलीलाई अहिले सञ्चो भएको होला । तर, उनले जनतालाई ठूलो धोका दिएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसद बैठक बोलाउन दिवाव दिन सकेको छैन । संसद बैठक चोल्ने हो भने कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध जोडदार माग उठाउने थिए । कांग्रेसको दवाव थेग्न समस्या हुन्छ भनेर ओलीले तत्काल संसदहरू बोलाउन चाहेका छैनन् । संसदीय समितिहरू पनि सक्रिय छैनन् । संसदीय समितिहरू सक्रिय हुँदा सरकारलाई दवाव पर्ने थियो । तर, ओली संसदीय समितिहरूलाई पनि सक्रिय हुन दिएका छैनन् ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरी छन् । उनीहरूको कार्य सम्पादन संसदभित्र निकै कमजोर छ । गुरुङको भन्दा पनि चौधरीको कार्यसम्पादन निरासाजनक रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सधै सक्रिय देखिने चौधरीले संसदीय गतिविधिमा आफूलाई अगाडि बढाउन सकेकी छैनन् । चौधरीलाई संसद सचिवालयले गाडीसहितको धेरै सुविधा दिएका छ । सचेतक चौधरीले कुनै काम गर्न सकेकी छैनिन् ।
चौधरीलाई सचेतक पदबाट हटाउन दवाव परिरहेको छ । केही सांसदहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर चौधरीलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
ओलीले चौधरीलाई हटाउने वा होइन केही भनेका छैनन् । चौधरीलाई हटाएर राम्रो मान्छेलाई सचेतक बनाउन दवाव परेपछि ओली पनि दोधारमा परेका छन् । बेलाबेला विवादमा आइरहने चौधरीलाई पनि काम गर्न नसकेको भनेर जानकारी छ । तर, उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनिन् ।
चौधरीले सचेतक पद हुँदा हुँदै मन्त्री बन्ने लविङमा पनि सक्रिय छिन् । नेकपाकी नेतृ समेत रहेकी चौधरीले अवसर पाउने थारु महिलामा सबैभन्दा धेरै पछिन् । मुक्त कमलरीको नाममा उनी मालामाल छिन् ।
सुरुमा संसदीय समितिको सभापति बनेकी चौधरीले कार्य सम्पादन राम्रो गर्न नसकेपछि हटाउन ओलीलाई दवाव भएको हो । हुन त चौधरी मन्त्री बन्ने सूचीमा छिन् भनेर हल्ला पिटाएकी छिन् । चौधरीलाई मन्त्री बन्न नदिन ओली निकटकै केही नेताहरू पनि सक्रिय छन् । युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
प्रमुख सचेतक गुरुङलाई पनि हटाउन दवाव परिरहेको छ । गुरुङले मन्त्री बनाउने हो भने मात्रै प्रमुख सचेतक पद छाड्ने मनस्थितिमा छन् । पुष्पकमल दाहाल र रामबहादुर थापाले गुरुङलाई मन्त्री बनाउन तयारी गरेका पनि छन् ।
भाग नपुग्ने भएपछि पूर्वमाओवादीले पाएको प्रमुख सचेतक पद पनि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा पनि छ । ओली सरकारलाई जनताको काम गर्न दवाव दिन पनि प्रमुख सचेतक र सचेत कार्यसम्पादनमा राम्रो हुनुपर्छ ।
शुक्रवार, आश्विन ९ २०७७१०:३८:३७
बाबुराम अध्यक्ष भएकै दिन जसपाका केन्द्रीय नेताले त्यागे पार्टी, लगाए गम्भीर आरोप
मन्त्रीको सूचीबाट सुवास नेम्बाङले यसरी काटिदिए विशाल भट्टराईको नाम
नेकपा जहाज दुर्घटना उन्मुख, सरकार परिवर्तनको संकेत
कांग्रेस प्रवेश गरेका दम्पतीमाथि रुकुममा गम्भीर आक्रमण
नेकपाका दुई समूहबीच भयंकर भिडन्त, जिल्ला सदस्यको मृत्यु
पाकिस्तानविरुद्ध नेपालमा भारतीय युवाले मनाए 'कालो दिन'
पाकिस्तानमा सेना र प्रहरीबीच भिडन्तमा, १० काे मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा घिनलाग्दो काम : सांसदहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाए दशैँ भत्ता